Ogaden News Agency (ONA) – Uhuru Kenyatta oo Markale Loo Dhaariyay Madaxtinimada Kenya.
Uhuru Kenyatta oo Markale Loo Dhaariyay Madaxtinimada Kenya.
Posted by Dayr	/ November 29, 2017
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay loo dhaariyey xilli cusub oo hoggaanka dalka ah, kadib guushii uu ka gaadhay doorashadii mucaaradka ay qaadaceen ee dhacday bishii October.
Dad gaadhaya 60,000 oo qof ayaa buuxiyey garoonka kubadda cagta Kasarani ee magaalada Nairobi oo xafladda lagu qabtay. Ka hor inta aysan billaaban xafladda ayaa booliiska waxa ay gaaska dadka ka ilmeysiiya ku fureen dadweyne isugu soo baxay banaanka garoonka, kuwaas oo isku dayayey inay xoog ku galaan gudaha garoonka.
Isla markaana booliiska ayaa sidoo kale gaas ku furay isu soo bax ay qeybo ka mid ah Nairobi ka sameeyeen taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, oo doonayey inay xusaan dadkii lagu dilay isku dhacyadii horey u dhex maray ayaga iyo booliska.
Madaxwayne Kenyatta ayaa markii hore doorashada ku guuleystay bishii August, hase yeeshee maxkamadda sare ee dalkaas ayaa nasakhday natiijada doorashada ayada oo sheegtay inay khaladaad ka dhaceen.
Doorashadii labaad oo dhacday October ayaa Kenyatta waxa uu ku guuleystay 98% codadka, kadib markii uu qaadacay musharaxa mucaaradka Raila Odinga oo isagu shuruudo adag kuxidhay kaqayb galkiisa doorashada.